တက်ဆွန် - ဝီကီပီးဒီးယား
အာဖရိကဆင်များကို မျိုးစုပုံစံဖြင့်ဆိုလျှင် အများအားဖြင့် လိုဇိုဒွန်တာမျိုးစုဟု သတ်မှတ်ကြသည်။
ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ရှိ သက်ရှိ ; တက်ဆွန် ( ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း - taxonomy ; တက်ဆာ [အများကိန်း])ဆိုသည်မှာ အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရန် သက်ရှိ သို့ သက်ရှိတစ်ဦး သို့ ထိုထက်ပိုသည့် အုပ်စုတစ်စုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဟု တက်ဆိုပညာရှင်များကဆိုသည်။ တက်ဆွန် အမည်ပေးခြင်းနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိရာ အထူးသဖြင့် အထက်ပါကိစ္စအပြီးသတ်သွားလျှင် သို့မဟုတ် အပြီးသတ်ပြီးသည့်အခါ လက်ခံအသုံးပြုကြသည်။ သို့သော် တက်ဆိုပညာရှင်မျာကြားတွင် တက်ဆွန်နှင့်ပတ်သက်သောအရာများပါဝင်မှုအတွက် အသုံးပြုသောစံနှုန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲလွဲမှုရှိနေသည်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။ တက်ဆွန်တစ်မျိုးအားတရားဝင် သိပ္ပံနည်းကျအမည်ပေးရာ၌ အသုံးပြုခြင်းသည် အုပ်စုတစ်စုအတွက်မည်သည့်က သိပ္ပံနည်းကျဖြစ်သည်၊ မည်သည့်အရာကမှန်ကန်ကြောင်းသတ်မှတ်သည့် nomenclature codes များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
၁ အမျိုးအစား (ဖြည့်စွက်ရေးသားရန်)
၂ ဥပမာ (ဖြည့်စွက်ရေးသားရန်)
မျိုးစိတ်များသည် စိုက်ပျိုးသောအပင်များကို အမျိုးအစားခွဲခြားရန်အတွက်သာ အသုံးပြုသည်။ မျိုးကွဲများကိုအသုံးမပြုရခြင်းမှာ တောရိုင်းအပင်များတွင်အသုံးမပြုသောကြောင့် မျိုးကွဲများသည်လူသားများမှထုတ်လုပ်သောထုတ်ကုန်များဖြစ်သောကြောင့်အရောင်၊ ရနံ့၊ အရွယ်အစား၊ စက်ရုံအမြင့်နှင့်အထွက်နှုန်း။ ကောက်ပဲသီးနှံများတွင်ဆန်၊ ဂျုံ၊ ပြောင်းနှင့်ဝါအမျိုးမျိုးတို့ပါဝင်သည်။ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဖြစ်သော rehmannia glutinosa တွင်ရွှေချန်ပီယံနှင့်ချန်ပီယံအသစ်များရှိပြီးဝါးအမြစ်ဂျင်းနှင့်အဖြူရောင်ဂျင်းတို့ပါဝင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများတွင်ရည်ညွှန်းထားသောမျိုးစိတ်များသည်အမှန်တကယ်အားဖြင့် taxonomy ရှိမျိုးစိတ်များနှင့်တစ်ခါတစ်ရံစိုက်ပျိုးသောအပင်မျိုးကွဲများကိုရည်ညွှန်းသည်။
မြန်မာဘာသာ လက်တင် အင်္ဂလိပ်
နယ်ပယ် regio domain
လောက regnum kingdom
မျိုးပေါင်းစု phylum divisio phylum (သတ္တ​​​ဗေဒ) division (ရုက္ခ​ဗေဒ)
မျိုးရင်း classis class
မျိုးစဉ် ordo order
မျိုးရင်း familia family
မျိုးစု genus genus
မျိုးစိတ် species species
အနုသက်ရှိမှန် (အနု : အလွန်သေးသည်၊ ငယ်သည်။ သက်ရှိ: အမှန်တကယ်တည်ရှိနေသည့်အရာ၊ အင်မတန်သေးငယ်သည့် သက်ရှိလေး။ မှန် : အမှန်ဖြစ်သည်။)ဆိုသည်မှာ တက်ဆွန် ​
域 အနုသက်ရှိမှန် Eukaryota အနုသက်ရှိမှန်
真核生物 Eukaryota 真核生物 Eukaryota ပိုးငယ်မွှားငယ် Bacteria
အပင် Plantae မှိုလောက Fungus ပိုးငယ်မွှားငယ် Bacteria
擔子菌門 Basidiomycota 變形菌門 Proteobacteria
亞門 六足亞門 Hexapoda 脊椎動物亞門 Vertebrata Magnoliophytina（真葉植物 Euphyllophytina） 傘菌亞門 Agaricomycotina
။ အောက်ပါဇယားရှိအသံထွက်သင်္ကေတများသည် Anglicized ဖြစ်သော်လည်းလက်တင်အသံထွက်ကိုလည်းအသိအမှတ်ပြုသည်။
ခွဲခြားခြင်းနှင့်သာသနာကိုသက်ရှိ (အပင်နှင့်တိရစ္ဆာန်များ) မှာကနဦးကြိုးပမ်းမှုအတွက်ထွက်ကိုသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည် Linnaeus 's အတွက် system ကို Systema Naturae, 10th edition, (1758)  အဖြစ်ကအတည်မပြုရသေးသောအလုပ် ဘား နှင့် Antoine Laurent က de Jussieu ။ ယူနစ်အခြေပြု ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာခွဲခြားမှု စနစ်၏အတွေးအခေါ်ကို ၁၈၀၅ ခုနှစ်တွင် Augustin Pyramus de Candolle ၏ အခြေခံပညာélémentaires de botanique ၏ Jean-Baptiste Lamarck 's Flore françoise ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ Lamarck အပင်များ၏ "သဘာဝခွဲခြား" များအတွက်စနစ်တစ်ခုချမှတ်ခဲ့သည်။ ထို အချိန်မှစ၍ စနစ်ကျကျဝါဒီများသည်ဘ ၀ ၏မတူကွဲပြားမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်တိကျသောအမျိုးအစားများကိုဆက်လက်တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ယနေ့“ ကောင်းသည်” သို့မဟုတ်“ အသုံးဝင်သော” တက္ကစီသည် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး ကိုထင်ဟပ်စေသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူလေ့ရှိသည်။ [မှတ်ချက် ၁]
အဆိုပါအသုံးအနှုန်း taxon ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် 1926 ခုနှစ်တွင်အသုံးပြုခဲ့သည် ဒေါ့ဖ် Meyer-Abich ဟူသောစကားလုံးအနေဖြင့်တစ်ဦး backformation အဖြစ်, တိရစ္ဆာန်အုပ်စုများအတွက် taxonomy ; Taxonomy ဟူသောစကားလုံးသည်လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်တစ်ခုကဂရိအစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်သောτάξις ( taxis, အစီအစဉ်အဓိပ္ပာယ်) နှင့် -νομία ( -nomia meaning method ) မှစတင်ခဲ့သည်။   အပင်သည်အားဖြင့်အဆိုပြုခဲ့ပါတယ် Herman ဂျိုဟန် Lam 1948 ၌၎င်း, က VII မှာမွေးစားခဲ့ပါတယ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရုက္ခဗေဒကွန်ဂရက် 1950 ခုနှစ်တွင်ကျင်းပ, 
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသတ္တဗေဒဆိုင်ရာသင်္ကေတ၏ ဝေါဟာရ (၁၉၉၉) က  ကသတ်မှတ်သည်
"taxon, (pl ။ taxa), n ။
↑ Quammen၊ David (June 2007)။ A Passion for Order။ National Geographic Magazine။ 27 April 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Principes de paléontologie။ Dunod။ 25 September 2013။ p. 122။ ISBN 978-2-10-070313-5။ La taxinomie s'enrichit avec l'invenition du mot «taxon» par Adolf Meyer-Abich, naturaliste allemand, dans sa Logik der morphologie, im Rahmen einer Logik der gesamten Biologie (1926) [Translation: Taxonomy is enriched by the invention of the word "taxon" by Adolf Meyer-Abich, German naturalist, in his Logik der morphologie, im Rahmen einer Logik der gesamten Biologie (1926).]
↑ Logik der Morphologie im Rahmen einer Logik der gesamten Biologie။ Springer-Verlag။ ISBN 978-3-642-50733-5။
↑ ICZN (1999) International Code of Zoological Nomenclature. Glossary Archived3January 2005 at the Wayback Machine.. International Commission on Zoological Nomenclature.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တက်ဆွန်&oldid=698627" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၀:၃၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။